Ciise - Dhibbanaha Ka Fiican, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Baahida loo qabo allabari Ciise
Maxaa yeelay sharcigu wuxuu leeyahay hooska alaabada mustaqbalka, maahan nooca badeecada laftooda. Sidaa darteed, ma ahan kuwa kaamil ah weligood inay dhammaystirto, maxaa yeelay allabaryo isku mid ah waa in sanad walba la sameeyo. Alla miyaan allabaryadi haddii kale joogsan lahayn haddii kuwa abaabula adeegga ay mar uun nadiif noqdaan oo aan dembi lahayn dembiyadooda? Waxayse taasi xusuusineysaa oo keliya dembiyada sanad walba. Maxaa yeelay suurtagal ma aha in dembiyada laga qaado dhiigga dibiyada iyo riyaha » (Cibraaniyada 10,1: 4, LUT).
Shuruucdii uu Eebbe faray dhibanayaashii Axdiga Hore wuxuu shaqeynayey qarniyo. Sidee dhibbanayaasha loo tixgelin karaa mid liita? Jawaabtu waa, sharciga Muuse wuxuu lahaa oo keliya "hooska alaabada mustaqbalka" ee maahan nooca badeecada laftooda Nidaamka dhibanaha ee sharciga Muuse (axdigii hore) wuxuu tusaale u ahaa allabarigii Ciise noogu deeqi lahaa. Nidaamkii axdigii hore wuxuu ahaa mid ku meel gaar ah, ma lahayn saameyn waara oo looma jeedin inuu sidaas sameeyo. Ku soo celcelinta dhibbanayaashu maalinba maalinta ka dambeysa iyo maalinta dib-u-heshiisiinta sannadba sannadka ka dambeeya waxay muujineysaa tabar-darrida ka jirta nidaamka oo dhan.
Allabaryo xayawaanku marna ma qaadi karaan dembiga aadanaha. In kasta oo Eebbe u ballanqaaday cafis la siinayo dhibbanayaashu rumaysta ee ku hoos jira Axdigii Hore, waxay ahayd oo keliya ku-meel-gaadhka dembiga mana aha ka saarista dambiga quluubta dadka. Haddii taasi dhacday, dhibbanayaashu ma ay yeelan lahaayeen allabaryo dheeraad ah oo iyagu dembiga xusuus uun ka lahaa. Allabaryo la bixiyo maalinta kafaaraggudka wuxuu daboolay dembiyadii dalka; laakiin dembiyadan "lama maydhin", oo dadkuna ma helin marag gudaha ah ee cafiska iyo aqbalaadda xagga Ilaah. Waxaa jiray baahi loo qabo dhibane ka wanaagsan dhiiga dibiga iyo riyaha, oo aan dembiyada qaadi karin. Kaliya allabari wanaagsan oo Ciise bixiyo ayaa taas sameyn kara.
Diyaar u ahaanshaha Ciise inuu naftiisa u huray
Taasina waa sababta uu isagu u leeyahay markuu dunida yimid: Maad doonayn allabaryo iyo hadiyado; laakiin jidh baad ii diyaarisay. Ma jecli inaad gubto dhibbanayaasha iyo dhibbanayaasha dembiga. Markaasaan idhi, Bal eeg, anigu waan imanayaa, oo kitaabka duudduuban wax baa lagu qoraa, waxaan yeelayaa, doonistaada, Ilaahow. Markii hore wuxuu yiri: "Ma aad jecli allabaryo iyo hadiyado, qurbaanno la gubo iyo qurbaanno dembi ah mana aad jeclaan", kuwaas oo loo bixiyo sida sharcigu leeyahay. Markaasuu yidhi, Bal eeg, waxaan u imid inaan sameeyo doonistaada. Kadibna wuxuu soo qaadayaa kan ugu horreeya si uu kan labaad u isticmaalo » (Cibraaniyada 10,5: 9).
Waxay ahayd Ilaah, oo aan ahayn qofkasta, oo sameeyey allabarigii loo baahnaa. Xigashada ayaa cadeynaysa in Ciise qudhiisu yahay dhammaystirka dhibanayaashii axdigii hore. Markii xoolaha la bixinayay, waxaa loogu yeedhi jiray allabaryo, halka dhibbanayaashii midhihii berrinka lagu yiqiin ay ahaayeen cuntooyin iyo qurbaanno cabitaan. Dhammaantood waa astaamo u ah allabarigii Ciise oo waxay muujinayaan qaybo ka mid ah hawshiisa badbaadadeenna.
Jumladda "laakiin waxaad ii diyaarsatay jidh" waxay ka hadlaysaa Sabuurradii 40,7 waxaana dib loo soo saaray iyadoo leh: "Dhegahaygii waad furtay" Ereyga "dhegaha furan" waxay u taagan tahay rabitaanka dhageysiga iyo addeecista doonista Ilaah Ilaahay wiilkiisi wuxuu siiyay jirka bini-aadamka si uu u oofiyo doonista aabaha dhulka.
Cadhada Eebbe ku saabsan dhibanayaashii Axdiga Hore ayaa laba jeer la muujiyey. Tan micnaheedu maahan in dhibanayaashan ay qaldameen ama rumaystayaasha daacadda ah aysan wax faa'iido ah lahayn. Eebbe kuma faraxsana dhibbanaha sidan oo kale marka laga reebo quluubta addeecda ee dhibbanayaasha. Allabari, inkasta oo weyni, ma bedeli karo qalbi addeecsan!
Ciise wuxuu u yimid inuu sameeyo doonista Aabbaha. Rabitaankiisu waa in axdiga cusub uu beddelo axdigii hore. Dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa, Ciise wuxuu kansaliyey axdigii ugu horreeyay ee adeegsanaya kan labaad. Akhristeyaashii asalka u ahaa Yuudas-Christian-ka ee warqaddan ayaa fahmay macnaha odhaahdan naxdinta leh - maxaad ugu noqonaysaa axdi la qaatay?
Waxtarka allabarigii Ciise
«Maxaa yeelay Ciise Masiix wuxuu dhammaystiray doonistii Eebbe oo jidhkiisii ​​u bixiyey allabari ahaan, hadda innagaa quduus laga dhigay mar iyo dhammaan» (Cibraaniyada 10,10 Tarjumaadda New Geneva).
Rumaystayaasha ayaa “quduus laga dhigayaa” allabari jidhka Ciise, oo had iyo goor wax allabari loogu bixiyey . Dhibane axdigii hore ma uusan samayn. Axdigii hore, dhibbanayaashu waa in mar laga noqdaa "iscasilaadooda" ciladohooda mar labaad iyo mar labaad.Laakiin 'quduusiinta' axdiga cusubi waxay ugu dambayntii iyo gebi ahaanba 'kala go'een' - maaha dantooda ama hawlahooda, laakiin waxay ugu wacan tahay allabari dhammaystiran oo Ciise.
2. allabarigii Ciise looma baahna in lagu celiyo
Wadaad waluba meel allabari ha ku ag istaago meesha allabariga maalin kasta, inuu sameeyo hawshiisa, oo wuxuu bixiyaa allabaryo isku mid ah wakhtiyo aan tiro lahayn oo aan dembigooda qaadi karin. Masiixu, dhinaca kale, wuxuu weligiis fadhiyey booska midig ee Ilaah midigtiisa ka dib markii uu gogol keliya u bixiyey dembiyada, wuxuuna sugayay in cadaawayaashiisa cagihiisa lagu dhigo. Maxaa yeelay, bixintii keliya ayuu mar keliya iyo weligiisba u sii daayay kulli kuwa isu oggolaada iyaga quduus uga dhiga dembigooda. Tan waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyay Ruuxa Quduuska ah. In Qorniinka (Jer. 31,33-34) Waxay leedahay bilowgeeda: »axdiga aan la dhigan doono iyagaan la mid noqon doonaa, ayaa Sayidka Rabbiga ahu leeyahay, qaynuunnadayda gelin doonaa qalbigooda, waanan ku dhex qori doonaa gudaha. «. Hadana waxay ku sii socotaa: "Weligey ka fiirsan maayo dembiyadooda iyo caasinimadooda amarradayda". Laakiin markii dembiyada la cafiyo, allabari dheraad ah looma baahna » (Cibraaniyada 10,11-18 Tarjumaadda New Geneva).
Qoraa warqad u ah Cibraaniyada ayaa ka soo horjeedda wadaadka sare ee Axdigii Hore iyo Ciise, wadaadka sare ee Axdiga Cusub. Xaqiiqada ah in Ciise la fadhiistay Aabbihiis ka dib markuu jannada kor u qaaday waxay caddayn u tahay in shaqadiisii ​​la dhammeeyey. Taa bedelkeeda, wadaaddadii axdiga hore weligood lama fulin; waxay sameeyeen isku allabari maalin walba, Dib-u-celintaani waxay caddayn u tahay in dhibanayaashoodu runtii aan iyagu dembigoodii qaadin. Waxa ay tobanaan kun oo dhibbanayaal xayawaan ahi ay gaari kari waayaan, Ciise wuxuu dhammaystiray weligiis iyo dhammaantiisii, isaga oo ah allabari qumman
Odhaahda "[Masiix] ... wuu fadhiistay" wuxuu loola jeedaa Sabuurka 110,1: "Midigtayda fadhiiso ilaa aan cadaawayaashaada cagahaaga hoostooda geliyo." Ciise hadda waa la sharfay oo wuxuu qaatay meeshuu guuleystaha. Markuu soo noqdo, wuxuu jebin doonaa cadow kasta, wuxuuna u dhiibi doonaa boqortooyada boqortooyada oo dhan. Kuwa isaga isku halleeya hadda looma baahna inay ka baqdaan maxaa yeelay waxaa "weligood la sii daayay". (Cibraaniyada 10,14). Xaqiiqdii, rumaystayaasha waxay la kulmaan "kaamilnimada Masiixa" (Kolonel 2,10). Iyada oo loo maro xiriirka aan la leenahay Ciise waxaan hor taaganahay Ilaah kaamil ah.
Sideen ku ogaan karnaa inaan booskan Ilaah hortiisa ku haysanno? Dhibanayaashu sida ku xusan axdigii hore ma dhihi karaan "mar dambe ma qabaan damiir ku saabsan dembiyadooda", laakiin kuwa rumeeysan Axdiga Cusub ayaa oran kara in Ilaah uusan mar dambe dooneynin inuu soo xusuusto dembiyadooda iyo khaladnimadooda darteed Ciise aawadood. Marka "allabari dambe oo dembi loo bixiyaa ma jiro". Sababtoo ah allabari dambe looma baahna "meeshii dembiyada laga cafiyo".
Markaan bilawno inaan aamino Ciise, waxaan la kulmaynaa runta in dembiyadeenna oo dhanna lagu cafiyey isaga dhexdeeda. Kicintaan ruuxiga ah, oo hadiyad ka timid xagga Ruuxa ay ina siineyso, waxay meesha ka saareysaa dhamaan dareennada dambiga. Rumaysad ayaynu ku garanaynaa inay su’aasha dembigu weligeed xallinayso oo annaguna xor u nahay inaan sidaas ku noolaano. Sidan ayaynnu “quduus uga nahay”.
3. Allabari ciise wuxuu jidka u furaa Ilaah
Sida ku xusan axdigii hore, rumayste ma noqon kara geesi ku filan inuu galo karaamadan barakaysan ee taambuugga ama macbudka. Xataa wadaadkii sare wuxuu qolka galay hal jeer sanadkii. Daaha qaro weyn ee ka soocda meesha ugu wada quduusan iyo kan qoduuska ah ayaa adeeg u noqday caqabad u dhexeysa dadka iyo Ilaah. Dhimashada Masiixa oo keliya ayaa jeexjeexan kara daahkan ilaa hoose (Markos 15,38) oo u furo jid dadka loogu galo meesha quduuska ah ee jannada ee Ilaah ku nool yahay. Iyadoo maskaxda lagu hayo runta, qoraaga warqaddu wuxuu Cibraaniyada u dirayaa casuumahan diiran:
Haddaba, walaalayaalow, gacaliyayaalow, waxaan haysanno meel bilaash ah oo aan bannaanayn oo aan marinno macbudka Ilaah, Ciise wuxuu inoogu furay dhiiggiisa. Iyada oo daahkii ah - taa macnaheedu waa gaar ahaan: iyada oo loo soo bandhigayo jidhkiisa - waxa uu dhigay wado aanu qofna hore u socon, Jid horseed u ah nolosha. Oo waxaynu haysannaa wadaad sare oo guriga Ilaah oo dhan ka hooseeya. Taasina waa sababta aan u rabno inaan ku hor tagno Ilaah hortiisa iyada oo aan loo kala harin oo kalsooni iyo kalsooni buuxda leh. Waxaa laygu rusheeyey dhiiga cibaadadayada gudeheena dhexdeeda sidaas darteedna waanu ka xoroobnay damiirkayaga dambiga leh, Hadal ahaan waxaan ku hadlaynaa - jidhkeenna oo dhan biyo nadiif ah ku maydhay. Intaa waxaa sii dheer, waxaan rabnaa inaan si adag u sii wadno rajada aan ballan qaadnay; maxaa yeelay, Ilaah waa aamin, wuuna rumoobaa wixii uu u ballanqaaday. Iyo sababta oo ah annaguna waxaan mas'uul nahay midba midka kale, waxaan rabnaa inaan ku dhiirrigelinno midba midka kale inuu is jeclaado oo wanaag isu sameeyo midba midka kale. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in aannaan ka fogaanin kulamadeenna, sida ay qaar u barteen, laakiin aan dhiirrigelinno midba midka kale, iyo wax kasta oo intaa ka sii badan, sida aad adigu iskaa u arki karto, maalinta ayaa soo dhowdahay markii Rabbigu soo noqdo » (Cibraaniyada 10,19-25 Tarjumaadda New Geneva).
Kalsoonidayada loo qabo in loo oggolaado galitaanka karaamada Quduuska ah ee Ilaah hortiisa waxay ku saleysan tahay shaqada loo qabtay Ciise, oo ah wadaadkayada sare. Maalinta kafaaraggudka, wadaadka sare ee axdigii hore wuxuu geli karaa oo keliya karaammada barakaysan ee macbudka haddii uu bixiyo dhibbanaha dhibbanaha. (Cibraaniyada 9,7). Laakiin waxaynu leennahay galitaanka Ilaah hortiisa ee kuma iman dhiigga xayawaan, laakiin waxaan u leennahay dhiigga Ciise daadshay. Fursaddan bilaashka ah ee jiritaanka Ilaah waa mid cusub oo aan qayb ka ahayn axdigii hore, oo loo yaqaan "midda la soo dhaafay iyo taariikhiba" oo "way baaba'a doontaa" goor dhow, iyaga oo soo jeedinaya in warqaddii Cibraaniyadii ahayd kahor macbudkii la burburiyey 70 AD. Qaabka cusub ee axdiga cusub waxaa sidoo kale loo yaqaan "jidka nolosha u horseeda" (Cibraaniyada 10,22) maxaa yeelay Ciise weligiis wuu noolaan doonaa weligiis istaagi maayo inuu na istaago. (Cibraaniyada 7,25). Ciise qudhiisa ayaa ah habka cusub ee nolosha! Waa axdiga cusub shaqsi ahaan.
Waxaan ugu tagnay Ilaah si xor ah oo kalsooni leh Ciise, oo ah wadaadka sare oo ku saabsan "guriga Ilaah". "Waxaan nahay gurigan - haddaan sii hayno rajada Eebbe ina siiyay oo na siiso farxad iyo kibir kalsooni leh" (Cibraaniyada 3,6 Tarjumaadda New Geneva). Markii maydkiisii ​​lagu shahiiday iskutallaabta oo uu naftiisii ​​allabari u bixiyey, Ilaah wuxuu jeexjeexay daahkii macbudka, oo tusay jidka cusub iyo nolosha u furan dhammaan kuwa Ciise rumeysan. Waxaan ku muujineynaa aaminaadaan adoo ka jawaabaya seddex qaab, sida warqad warqad u ah Cibraaniyada u qeexday martiqaad seddex qaybood:
Aynu halkaa tagno
Axdigii hore, wadaaddadu waxay kaliya u dhowaan karaan joogitaanka Ilaah ee macbudka ka dib markay soo maraan wasakhooyin kala duwan oo cibaado. Sida ku xusan axdiga cusub, dhammaanteen waxaan helnaa si bilaash ah oo aan ugu tagno Ilaah xagga Ciise xagga daahirinta gudaha (qalbiga) wixii lagu sameeyay bini-aadamnimadiisa noloshiisa, dhimashadiisa, sarakiciddiisa iyo kororkiisa. Ciise, waxaan "ku rushaynay dhiiga ciise ee gudahayaga" iyo "jirkeena waxaa lagu maydhay biyo saafi ah." Sidaas darteed, waxaan leenahay wehelnimo buuxda oo aan la leenahay Ilaah, sidaa darteedna waxaa naloogu martiqaaday "u dhawa" - helitaan, Aynu aad u dhiirranow, oo geesinimo iyo iimaan leh ka buuxo kan Masiixa inagu leh.
Aynu si adag u xajiso
Akhristeyaashii asalka u ahaa Yahuudda-Christian-ka ee warqaddii ay u qoreen Cibraaniyada ayaa la isku dayay inay ka tanaasulaan Ciise si ay ugu noqdaan amarkii Axdiga Hore ee cibaadada ee rumaystayaasha Yuhuudda. Caqabada iyaga ku ah "qabashada" maahan inay ku hayaan badbaadadooda badbaadada ee Masiixa ku jirta, laakiin waa "si aan qarsoodi lahayn u sii wadida rajada" ay "ku andacooto". Tan waxaad ku sameyn kartaa kalsooni iyo adkeysi maxaa yeelay Ilaahii ballanqaaday inaan heli doonno gargaarka aan u baahan nahay waqtiga saxda ah (Cibraaniyada 4,16), waa "aamin" oo dhawra wixii uu ballanqaaday. Hadday kuwa aaminka ahi rajadooda ku qabaan Masiixa oo ay isku halleeyaan aaminnimada Ilaah, ma ceeboobi doonaan. Aynu hore u eegno rajo iyo aaminaan Masiixa!
Yaanan ka tagin kulamadeenna
Kalsoonidayada sida rumaystayaasha Masiixa inay u galaan jiritaanka Ilaah waxaa loo muujiyay ma aha oo keliya shaqsi ahaan, laakiin sidoo kale wada jir ah. Waxa suurta gal ah in Masiixiyiinta Yuhuuda ah ay la kulmaan Yuhuudda kale ee sunagogga sabtida kadibna ay ku kulmaan bulshada Masiixiyiinta Axadda. Waxay isku dayeen inay ka baxaan bulshada Masiixiyiinta ah. Warqadda loo soo diro Cibraaniyada ayaa sharraxaysa inayna ahayn, isla markaana ku dhiirrigeliyaan midba midka kale inuu sii wado ka-qaybgalka shirarka.
Wehelnimada aan la leenahay Ilaah waa inaanay waligeed noqon mid is-dhexeysa. Waxaan ku jirnaa iskaashi aan la yeelanno rumaystayaasha kale ee jameeco maxalliga ah (sidayada oo kale). Muhiimadda halkan warqaddu ku leedahay Cibraaniyada ma ahan waxa qofka rumaystaha ahi ka helo booqashada kaniisadda, laakiin waa waxa uu ku biiriyo tixgelinta kuwa kale. Imaanshaha joogtada ah ee jameecoyinka waxay dhiirigelisaa oo ku dhiirrigelisaa walaalaheenna Masiixa ku jira inay "is muujiyaan jacayl oo wanaag isu wada sameeyo". Ujeeddada adag ee adkaysashadan ayaa ah imaatinka Ciise Masiix. Waxaa jira tuduc labaad oo keliya oo ereyga Giriigga ah ee “isu imaatinka” loogu adeegsaday Axdiga Cusub dhexdiisa, oo ah tan 2 Tesaloniika 2,1, halkaas oo ay ku biirtay " (NGÜ) »ama« Golaha (LUT) »waxaa loo tarjumay oo loola jeedaa soo laabashada Ciise dhammaadka da'da.
Waxaan leennahay sabab kasta oo aan ku helno kalsooni buuxda oo aan ugu gudubno xagga iimaanka iyo adkeysiga. Waa maxay sababta? Maxaa yeelay, Rabbiga aan u adeegno waa allabarikeenna ugu sarreeya - Oo allabarigiisa annaga noogu filan wax kasta oo aan u baahan nahay. Wadaadkeena sare ee awooda leh ee awooda leh ayaa ina keenaya himilada - had iyo jeer wuu inala joogi doonaa oo wuxuu noo horseedi doonaa dhammaystir.
waxaa qoray Ted Johnson